Olee otú Jikọọ Android na ekwentị PC |
Olee otú Jikọọ, rụọ ọrụ na Control akporo ekwentị na PC
Obi abụọ adịghị, Android igwe fegharịrị ahịa na a oké ifufe nakwa dị ka revolutionizing mobile ụlọ ọrụ. Ebe ọ bụ na e nwere ntọhapụ, ọnụ ọgụgụ na-egosi na igwe na-n'ezie họọrọ site ọtụtụ. Ọ bụ oké mkpa ịmata otú jikọọ gị android ekwentị na laptọọpụ ma ọ bụ PC karịsịa inye nkwado na mmekọrịta ọmụma na ekwentị gị. N'ezie, android ekwentị nwere ike mfe ike jikọọ a PC ma ọ bụ na laptọọpụ ezie Wi-Fi ma ọ bụ eriri USB.
Part m: Olee jikọọ android ekwentị na PC na USB
Part II: n'Ịchịkwa akporo ekwentị na PC Iji Wondershare MobileGo
Part III: Iji Wondershare MobileGo ka Control Android on PC
1. Mgbe ejikọta android ekwentị USB, ọ bụ nke kachasi mkpa na-uncheck USB debugging mbụ. A nwere ike mere site na ịga na 'Ntọala' mgbe ahụ na ịpị 'Ngwa', wee 'Ngwa Ntọala' na mgbe ahụ na-ahọpụta 'Development' na mgbe ahụ 'USB debugging.'
2. The eriri USB kwesịrị mgbe plugged na USB Port na laptọọpụ ma ọ bụ PC. Ihe nnọchianya nke USB icon ga-apụta. Nke a na-egosi na ngwaọrụ na-ọma mata site na PC ma ọ bụ na laptọọpụ. On ngwaọrụ isi ihuenyo, aka 'USB Jikọrọ'
Ọ bụrụ na njikọ dị ihe ịga nke ọma, mgbe ahụ, ngwaọrụ kwesịrị egosi on 'Devices na mbughari Nchekwa' nke laptọọpụ ma ọ bụ PC.
Wondershare MobileGo bụ ngwá ọrụ na simplifies ịchịkwa nke fọrọ nke nta ihe niile na android ekwentị site laptọọpụ ma ọ bụ PC. Ọ na-eme ka ọ dị mfe iji zipu ma zaghachi akụkụ, ebufe nke ozi kọntaktị, na-eweghachiri na-akwado nke faịlụ, wụnye na iwepu ngwa, ịchọta oyiri kọntaktị, ebufe photos, music na vidiyo.
Ọ bụ uru arịba ama na tupu ị na-enwe ndị a dị ịtụnanya atụmatụ nke Wondershare MobileGo, i kwesịrị ibudata ma wụnye ya. Ọ nwere ike mfe rụọ ọrụ ozugbo ọ ejikọrọ site Wi-Fi ma ọ bụ eriri USB.
Izipụ na Azaghachi Texts / Ozi
Na Wondershare MobileGo, ọ bụ ihe dị mfe jikwaa ozi ma ọ bụ akụkụ na gị android na ekwentị gị laptọọpụ ma ọ bụ PC. Ọ na-ekwe ka ị na-ezite dị nakwa dị ka zara ozi-eji kọmputa gị nyere e nwere ihe ịga nke ọma njikọ site na eriri ma ọ bụ Wi-Fi. Mkpa ezu, ị pụrụ ịhụ mgbe ozi e zigara, bụ onye zitere ya na kwa nwere otu nhọrọ nke na-azọpụta ozi ma ọ bụrụ na ọ bụ dị gị mkpa.
Iweghachi & Ichekwa Up nke Files
E nwere ọnụ ọgụgụ nke android-dabere na ngwa na-enye otu nhọrọ nke iweghachi nakwa dị ka akwado nke faịlụ. Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime ndị a ngwa ndị ahụ adịghị mma n'ihi na ha ngwa ngwa karịsịa n'oge ime ihe na-eduga ọnwụ nke dị mkpa kọntaktị ma ọ bụ data. Ụfọdụ n'ime ha kwa bụ na-ewe oge mgbe Iweghachi na-akwado faịlụ. Ndị a niile nsogbu na-zuru oke agwa okwu Wondershare MobileGo
Ọ dị mfe tinye ma nyefee music na Wondershare MobileGo. Ọzọkwa, ị pụrụ họrọ ọtụtụ songs na mbubata ha n'out oge. File formats dị ka MP3, FLACS, AACs dị nnọọ banyere ole na ole nwere ike mfe-converted na-egwuri na gị chọrọ usoro. E nwekwara otu nhọrọ nke na-ahọpụta ọtụtụ traktị na mgbe ahụ Ịdọrọ na idobe ha na nchekwa. Ọzọkwa, ọ dị mfe gbanwee nakwa dị ka ịmepụta listi ọkpụkpọ.
Nyefee nke Photos
Ozugbo e nwere ihe kwụsị njikọ site Wi-Fi ma ọ bụ eriri USB, ị nwere ike mfe agagharị foto gị comfortably. Na Wondershare MobileGo, ị pụrụ ime ndokwa foto gị, ele, òkè na mbupụ ha na ntukwasi-obi. Ọzọkwa, ị nwere otu nhọrọ nke na-ahọpụta ọtụtụ foto ma ọ bụ foto na ịkekọrịta ma ọ bụ mbupụ ha.
Nyefee nke Movies
Wondershare MobileGo ka ọ dị mfe na-egosipụta ozi kọntaktị na ekwentị gị ma ọ bụ ndị ọzọ na nyiwe ihe atụ, Gmail. Ọ dị mfe mbubata nakwa dị ka bupu ozi kọntaktị, ịtụkwasị kọntaktsị na iche iche iche iche gụnyere mmiri elu, ihichapụ na-ezite kọntaktị. Ọzọkwa, i nwere ike tinye ndị ọzọ kọntaktị.
Ebufe ozi kọntaktị
Dị ka e kwuru ná mmalite, Wondershare bụ ngwá ọrụ na-enye ohere ọrụ ịchịkwa ha android ngwaọrụ na PC ka ihe atụ, na-eweghachiri, ebufe na-akwado nke dị iche iche nwere nyere e Iweputa njikọ site Wi-Fi ma ọ bụ eriri USB.
Mgbe ọma na nbudata na wụnye Wondershare MobileGo, ị ga-hụ na US Debugging na-nyeere. Iji mee nke a, na-ezo aka nzọụkwụ depụtara na mbụ.
Mgbe mmalite ngwa na gị android, ndị na-esonụ Pop elu:
The QR koodu ga-akpaghị aka na-egosipụta na PC. Mkpa ka ị ike iṅomi a koodu na iji Wondershare MobileGo ngwa nke mere na ekwentị zuru ezu njikọ na PC.
The nzọụkwụ ọzọ bụ na-anabata na arịrịọ nke njikọ ọhụrụ. Nke a ga-enyere mmekọrịta photos, faịlụ, ngwa dị nnọọ banyere ole na ole.
Ndabere, nyefee na weghachi faịlụ, fim, songs wdg pịa 'Back elu'. Ọzọkwa, ị nwere ike iweghachi ihe faịlụ.
The Wondershare MobileGo akwado transfer na mbipụta nke kọntaktị. Wepụ oyiri kọntaktị na-simplified.
Na ngwá ọrụ ị pụrụ zaghachi ma ọ bụ zipu odide ma ọ bụ iju ma ọ bụ na-anabata na-abata oku si laptọọpụ ma ọ bụ PC. Ọbụna otu ide ozi n'ekwe ntị na-nyeere. Texts ike ngwa ngwa dị ma ọ bụ exported.
The ngwá ọrụ na-abịa na a mma na-na-mfe nzukọ nke ngwa. Ọzọkwa, onye ọrụ nwere ike iwunye nakwa dị ka uninstall ngwa. Onye ọrụ na-nwere otu nhọrọ nke Ichekwa ndabere na Iweghachi ẹdude ngwa iji Wondershare MobileGo faili. Ọ na-atụmatụ Google play ụlọ ahịa nke na-enye ohere ka ndị mmadụ ibudata ma wụnye dị iche iche ngwa ọdịnala na ekwentị site na laptọọpụ ma ọ bụ PC.
Ọ na-atụmatụ YouTube na Wontube MP3 Download. Nke a na-enye ohere ọrụ ibudata songs, videos na kwa na-ekiri vidio.
Olee otú Igosi PC Health Tulee
> Resource> Windows> otú jikọọ rụọ ọrụ na Control akporo ekwentị na PC